♦♦♦ဆရာခိုနဲ့နိုင်ငံတကာက USကိုသရော်ခဲ့ပီးနောက် US ဟာ ကြောင်အိုလို့ ကြွတ်မလေးဖြစ်နေပြီလား?
ကြောင်အိုလို့များ ကြွတ်မလေးတော့လားမသိ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အမေရီကန်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ နိုင်ငံအတော်များများက ယန်ကီးတွေကို ပုတ်ခတ်တာ အင်အားပြတာတွေ ပိုများလာတာကို တွေ့ရတယ်။ အီရန်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်က သူတို့ရေပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်လာတဲ့ ရန်သူတွေဟာ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ သောကြာနေ့မှာ အမေရီကန်ကို
ဦးတည်ပြီး သတိပေးခဲ့သလို တနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်း အီရန်ဥသျှောင်ကြီးက အမေရီကန်ရဲ့ စစ်အင်အားက ဟောလိဝုဒ်ဖန်သားပေါ်မှာဘဲရှိတယ်လို့ လှမ်းပြီးရိလိုက်ပြန်တယ်။ တစ်ခါ မြောက်ကိုရီးယားကလည်း သူတို့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်တာကို စည်းဝေးခေါ်ရမလားဆိုပြီး ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကို သတိပေးလိုက်ပြန်တယ်။ နောက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေက
သူတို့နဲ့တည့်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့ ဘာလုပ်လုပ် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မတည့်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့ အပြစ်တင်ဘို့ လိုက်ရှာနေတယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ဒီလိုစနစ်နှစ်မျိုးနဲ့ ကုလကို အသုံးချနေတယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပြန်တယ်။ တရုတ်ကလည်း အမေရီကန်တို့ရဲ့ AUKUSမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း တောက်လျောက်ဆိုသလို ထိုင်ဝမ်ကို လေကြောင်းကနေ အင်အားပြနေတယ်။
အောက်တိုဘာ(၁) ရက်နေ့ကဆိုရင် H-6လို နျူးကလီးယားဗုံးကြဲလေယာဉ်ကြီးတွေတောင် ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုရှားကတော့ အမေရီကန်က ဩစတေးလျကို ရေငုတ်သင်္ဘောရောင်းတာဟာ နျူလက်နက်ပြိုင်ပွဲကို ဦးတည်စေလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးထားတယ်။ အခါတိုင်းတော့ ယန်းကီးတွေက သူကဘဲ သူများနိုင်ငံတွေကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့
ကြိမ်းမောင်းနေတာ အခုတော့ သူ့ကြိမ်းမောင်းခံရတာကို ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတယ်။ ကြောင်အိုလို ကြွတ်မလေးတာလား? ထိုးမယ့်ဆင် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်တာလား?ဆိုတာကတော့ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး စောင့်ကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ သိပ်တော့မကြာပါဘူး။ နောက်ငါးနှစ်လောက်ဆို ဘယ်သူက ကျား၊ ဘယ်သူက ကြောင်ဆိုတာ ပေါ်လာပါတော့မယ်။
♦♦♦ဆရာခိုနဲ႔နိုင္ငံတကာက USကိုသေရာ္ခဲ့ပီးေနာက္ US ဟာ ေၾကာင္အိုလို႔ ႂကြတ္မေလးျဖစ္ေနၿပီလား?
ေၾကာင္အိုလို႔မ်ား ႂကြတ္မေလးေတာ့လားမသိ။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အေမရီကန္နဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ယန္ကီးေတြကို ပုတ္ခတ္တာ အင္အားျပတာေတြ ပိုမ်ားလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အီရန္ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က သူတို႔ေရပိုင္နက္ကို က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ ရန္သူေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ေသာၾကာေန႔မွာ အေမရီကန္ကို
ဦးတည္ၿပီး သတိေပးခဲ့သလို တနဂၤေႏြေန႔မွာလည္း အီရန္ဥေသၽွာင္ႀကီးက အေမရီကန္ရဲ့ စစ္အင္အားက ေဟာလိဝုဒ္ဖန္သားေပၚမွာဘဲရွိတယ္လို႔ လွမ္းၿပီးရိလိုက္ျပန္တယ္။ တစ္ခါ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း သူတို႔ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္တာကို စည္းေဝးေခၚရမလားဆိုၿပီး ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီကို သတိေပးလိုက္ျပန္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အေနာက္နိုင္ငံေတြက
သူတို႔နဲ႔တည့္တဲ့နိုင္ငံေတြေတာ့ ဘာလုပ္လုပ္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး မတည့္တဲ့နိုင္ငံေတြကိုေတာ့ အျပစ္တင္ဘို႔ လိုက္ရွာေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုၿပီး ဒီလိုစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ကုလကို အသုံးခ်ေနတယ္လို႔ သတိေပးခဲ့ျပန္တယ္။ တ႐ုတ္ကလည္း အေမရီကန္တို႔ရဲ့ AUKUSမဟာမိတ္ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတာက္ေလ်ာက္ဆိုသလို ထိုင္ဝမ္ကို ေလေၾကာင္းကေန အင္အားျပေနတယ္။
ေအာက္တိုဘာ(၁) ရက္ေန႔ကဆိုရင္ H-6လို န်ဴးကလီးယားဗုံးၾကဲေလယာဥ္ႀကီးေတြေတာင္ ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႐ုရွားကေတာ့ အေမရီကန္က ဩစေတးလ်ကို ေရငုတ္သေဘၤာေရာင္းတာဟာ န်ဴလက္နက္ၿပိဳင္ပြဲကို ဦးတည္ေစလိမ့္မယ္လို႔ သတိေပးထားတယ္။ အခါတိုင္းေတာ့ ယန္းကီးေတြက သူကဘဲ သူမ်ားနိုင္ငံေတြကို တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မရိုးရေအာင္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
ႀကိမ္းေမာင္းေနတာ အခုေတာ့ သူ႔ႀကိမ္းေမာင္းခံရတာကို ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနတယ္။ ေၾကာင္အိုလို ႂကြတ္မေလးတာလား? ထိုးမယ့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္တာလား?ဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္နည္းနည္းေပးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ သိပ္ေတာ့မၾကာပါဘူး။ ေနာက္ငါးႏွစ္ေလာက္ဆို ဘယ္သူက က်ား၊ ဘယ္သူက ေၾကာင္ဆိုတာ ေပၚလာပါေတာ့မယ္။
Previous Article ♦♦♦အမေရိကန်ရေတပ်က တစ်စင်းလျှင် ဒေါ်လာ ၁ ပြားစီဖြင့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟောင်းနှစ်စင်းကို သင်္ဘောဖျက်ကုမ္ပဏီထံ ရောင်းချ
Next Article ♦♦♦သာကောကိုအဆင်းဘီးတပ်ပေးလိုက်ပီး အိန္ဒိယက မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာအတွက် တရုတ်ကိုလက်စားချေပေးခဲ့